Izinwele ziwela emva kokukhulelwa
Inani elininzi labasetyhini lijongene nale ngxaki xa iinwele ziwela emva kokukhulelwa. Kodwa ungakhathazeki - okwethutyana. Nsuku zonke umntu ulahlekelwa ngeenwele ezili-100 ngosuku, kwaye emva kokukhulelwa kathathu ngaphezulu. Xa ukhulelwe izinwele akuyi kuphuma, kwaye emva kokubaninzi kukho ingxaki. Makhe siqwalasele, ingaba kuthathwa njengesiqhelo kunye nento yokwenza okanye yenza xa izinwele ziphuma emva kweentlobo okanye ukukhangela.
Kungekudala iinwele ziya kubuyela emva kokukhulelwa?
Sinokuthi xa iinwele ziwela kwizinwele zomama emva kokukhulelwa, le yinkqubo yemvelo, ekubeni imvelaphi ye-hormonal ayikabuyiselwa. Kubalulekile ukwazi ukuba kwiinyanga ezi-4-6 emva kokuzalwa komntwana umsebenzi we-hormonal emzimbeni uya kuvuselelwa ngokupheleleyo kwaye uya kulibala ngeengxaki zakho neenwele.
Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba emva kokuba imvelaphi ye-hormone emzimbeni ihlengahlengiswa, ezinye iimpawu zokunyuka kweenwele ziyaqhubeka. Ngoko ke, ibhinqa ngokukhawuleza emva kokuzalwa likhuthazwa ukuba lihlawule intloko zayo. Ngezenzo ezifanelekileyo, i-scalp kunye neenwele ezilimele zingabuyiselwa, kwaye ukulahlekelwa kweenwele ezinamandla kunokukhuselwa.
Uncedo lweenwele emva kokukhulelwa
Ukomeleza iinwele emva kokukhulelwa kunceda ama-masks avela kwi-whey, isonka se-rye, i-yolk yolk. Gcoba iincinci kakuhle nge-decoctions yemifuno, umzekelo, i-nettles kunye ne-burdock. Zininzi ezininzi zokupheka kunye nayo yonke intokazi inokuzikhethela yona into efanelwe yona.
Emva kokukhulelwa okufutshane kunqunywe - oku kuya kuqhubeka nokukhula kweenwele ezinamandla. Inwele emfutshane ayifanele ukuba yenziwe, yanele nje ukuyiqingca ngo-5-10 cm.
Ukutya komfazi kubaluleke kakhulu ekubuyiseleni iinwele emva kokuzalwa komntwana. Gwema ukutya, ukucoca kunye nosawoti. Yibandakanya nokutya kwemveliso yendalo kunye nentsholongwane.
Kananjalo, oogqirha abaninzi emva kokukhulelwa bayacetyiswa ukuba basele amavithamini, mhlawumbi i-multivitamines, okhethekileyo kumama oongikazi. Oku kuya kunceda ukubuyisela iinwele, njengoko iivithamini ziya kuzalisa ukusilela kwezinto ezilandelwayo, ezifunekayo umzimba.
Intloko kufuneka ihlanjwe ngama-shampoos, afanelekileyo kwisakhiwo seenwele zakho, kwaye emva koko kunqweneleka ukuba oomama abancinci basebenzise inzuzo. Izinwele ziya kuthoba kwaye xa zidibanisekile, "ziya kubandezeleka." Ubunwele bumnwele kufuneka bube buthambile.
Ukunciphisa i-dryer eyinwele, kuba umoya oshisayo unokuchaphazela inwele ephilileyo, kunye neenwele emva kokuzalwa, ezibuthathaka, ngakumbi. Ngesizathu esifanayo, thintela ilanga elishisayo, sebenzisa i-headdress.
Into ebalulekileyo kukuba, emva kokukhulelwa, isimo sengqondo somfazi sichaphazela imeko yeenwele. Ugxininiso olunzulu kunye nokukhathala kufuneka kugwenywe.
Ngokuxilongwa ngokufanelekileyo kwimeko ye-scalp kunye nesakhiwo seenwele, unyango lwabo luqala. Kule meko, izizathu zokulahlekelwa yintlungu kunye nomonakalo zichongiwe. Kule mihla, kukho iindlela ezintsha zokuphatha iinwele, ukuvumela ukuba usebenze ngokufanayo kwizinwele ezikhethekileyo kwaye wenze intloko.
Unokubala njani umjikelezo wakho wokuya esikhathini?
Uphuhliso lwe-intrauterine lomntwana kunye nezinto zalo
Yintoni oyifunayo ukuba uyazi malunga nomfazi okhulelwe?
Ukukhulelwa: umsebenzi wokusebenza
Iiparameters ze-fetus kwi-trimester yesithathu yokukhulelwa
Amandla ebhinqa kukuzala abantwana
Ukutya kunye ne-kiwi izithelo
Umculi omkhulu waseDutch uVangh
Inkwenkwezi ye-Ex-2 "I-Doma-2" Ngamana uAbrikosov wayengumntu olixhoba lokuhlaselwa kweendaba, iifoto
Ingulube nelayisi kwi-multivark
Iipatata kunye neembotyi kunye nengulube ne-cheese-carrot egqoka
Ukuba indoda iyabuhlungu
Izinto eziphambili ezinciphisa umnqweno wesini
Ukuguqa nokuvuvukala kwesikhumba kwindawo ephezulu yangaphandle yezihlathi
Masks esekelwe kwi-kefir yeenwele
Ukuqulunqwa kwesakhiwo ngokwemithetho yeFeng Shui
Ikhuphiswano "Ingubo egqibeleleyo"
Indlela yokukhetha nokusebenzisa isiseko
Ngelishwa, usuku lokuzalwa kanye kuphela ngonyaka